पत्रकार चटौतको उपचारका लागि देउवाद्वारा आर्थिक सहयोग अभियान – Sodhpatra
रहेनन् सन्देश नेपालका संस्थापक धनगढीका चटौत !
अक्सिजनको कमीका कारण धनगढीका डिजे ‘म्याक्स’ रानाको ज्यान गयो !
‘देश विकासमा युवाको भूमिका’ : सुर्जन बोहरा
‘स्वार्थको राजनीति कहिले सम्म ?’ : दिपक बिष्ट
‘नेपालले विकासको गतिमा फड्को नमार्नुको एक कारण’ : सन्तोष बोहरा
तिमीलाई धेरैधेरै धन्यवाद छ सरकार ! : नेत्र प्रसाद उपाध्याय
गर्भमा रहेको शिशुलाई कोरोनाबाट यसरी बचाउनूस्
किन हुन्छ शरीरमा अक्सिजन को कमी ? अक्सिजन कम हुँदा यी कुराहरुमा ध्यान दिनूस् !
अत्तरिया बजारमा अनुगमनः विपतको समयमा मनलाग्दी मूल्यवृद्धि गर्ने २ मेडिकल कारबाहीमा
सडक सञ्जाल सँग जोडिँदै भटना, वर्षौँ देखीको पर्खाइ पुरा भएकोमा स्थानीय हर्षित !
‘साथी किन बसेको चुप लागेर’ – कविता : हेनरी हर्क
सुदूरपश्चिममा पछिल्लो २४ घण्टामा ३२ जनाले जिते कोरोना, कुल संक्रमीतको संख्या कति ?
पार्टीको अनुशासन उल्लंघन गरेको भन्दै कैलालीका ४ जनप्रतिनिधि पदमुक्त
मुक्त कमैयालाई खर्च चलाउनै गाह्रो !
चैते धान भित्र्याउन नपाउँदा कैलालीका किसान समस्यामा
पुनः छैटौ पटक थपियो कञ्चनपुरमा जारी निषेधाज्ञा !
धनगढीमा सडक भत्काएको तर नबनाएको भन्दै स्थानीयले गरे सडकमै रोपाई !
प्रहरी कार्यालयमा रंगभेदी अभिव्यक्ति दिने ‘सामाजिक अभियन्ता’ ज्वाला संग्रौलासहित ५ जना पक्राउ
दलित भएकै कारण एक युवतीलाई कोठा नदिएको आरोपमा घरबेटी पक्राउ
यातायात व्यवस्था विभागले साउन १ गतेदेखि दुई प्रकारको सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण गर्ने
एनआईसी एशिया बैंकको डेबिट कार्डका लागि अनलाइनबाटै आवेदन दिन मिल्ने !
झरीमा कामकाजका लागि घरबाट बाहिर निस्कँदा स्मार्टफोन जोगाउन नसकेर झन्झटमा हुनुहुन्छ ?
असार मसान्तसम्म कक्षा ११ र भदौ अन्त्यसम्म कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिने
पत्रकार चटौतको उपचारका लागि देउवाद्वारा आर्थिक सहयोग अभियान
पहिलो दिन सञ्चारकर्मीहरुबाट झण्डै १६ हजार नौ सय १५ रुपैया संकलन
प्रकाशित : ११ बैशाख २०७८, शनिबार १९:२० April 24, 2021
धनगढी: काठमाडौंमा उपचाररत कैलालीका पत्रकार पुष्पराज पिआर चटौतको उपचारका लागि सहयोग रकम संकलन अभियान शुरु गरिएको छ ।
प्रेस यूनियन कैलाली शाखाका अध्यक्ष श्रवण देउवाको नेतृत्वमा शनिबारदेखि सो अभियान शुरु गरिएको हो । अभियानको पहिलो दिन सञ्चारकर्मीहरुबाट झण्डै १६ हजार नौ सय १५ रुपैया“ संकलन गरिएको थियो ।
संकलित रकमलाई नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रिय महासचिव रोशन पुरीलाई हष्तान्तरण गरिएको थियो । नेपाल पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष योगेश रावल र प्रेस यूनियन कैलाली शाखा अध्यक्ष देउवाले संयूक्त रुपमा महासचिव पुरीलाई रकम हष्तान्तरण गरेका थिए ।
सो अवसरमा बोल्दै महासचिव पुरीले पत्रकारको स्वास्थ्य उपचारका लागि संकलित रकम भेटेर हष्तान्तरण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले केन्द्रिय समितिले पनि पत्रकार चटौतका लागि आर्थिक सहयोगका लागि पहल गर्ने बताए । उनले भने –‘अहिले सञ्चारकर्मीहरु जटिल अवस्थामा पुग्दा स्वास्थ्यउपचार गर्न आर्थिक अभाव झेलिरहेका छन । यस विषयमा महासंघ गम्भिर हुनेछ र पहल थाल्नेछ ।’
नेपाल पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष योगेश रावलले पत्रकारको स्वास्थ्यउपचारका लागि एक करोडको कोष स्थापना गरिने घोषणा गरे । उनले भने –‘अहिले पत्रकारहरु विरामी पर्दा आर्थिक अभाव झेलिरहेका छन । यो समस्या आउन नदिन महासंघले एक करोडको अक्षयकोष स्थापना गर्ने छ । मेरो पहिलो अभियाननै यही हुने छ ।’
प्रेस यूनियनका अध्यक्ष श्रवण देउवाले सानो–सानो रकम संकलन गरेर पत्रकार चटौतको उपचार खर्चमा केही राहत पुगोस भनेर अभियान सञ्चालन गरिएको बताए ।
पत्रकार चटौत २०६४ सालमा मोटरसाईकल दुर्घटनामा परि घाइते भएका थिए । अहिले उनको कुइनोको नशा च्यापिएको जनाइएको छ । सो को अप्रेसन गर्न मह“गो शूल्क लाग्ने भएकाले आर्थिक सहयोग अभियान गरिएको हो ।
३० मिनेट अगाडी
प्रचण्ड गर्मीले हाम्रो दिमागलाई कस्तो असर पार्छ ?
‘वर्तमान राजनीति कि हाल’ – सन्तोष बोहरा
भीरबाट लडेर बैतडीमा एक महिलाको ज्यान गयो !